Thenga i-Drospirenone powder (67392-87-4) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / I-Drospirenone powder (i-67392-87-4)
SKU: 67392-87-4. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-order of mass of Drospirenone powder (67392-87-4), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Drospirenone powder yindlela yokwenziwa kweprogesin eyenziwa yi-analog kwi-spironolactone. Itholakala kwinani lolawulo lokuzalwa. I-Drospirenone ihluke kwezinye iiprogentic zokwenziwa kwendlela yokuba iprojekthi yezolimo yezilwanyana kwiingcaphephe zovavanyo zibonisa ukuba isondele kwiprogesterone yemvelo ....
Drospirenone powder ividiyo
Drospirenone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Drospirenone powder
I-molecular Formula: C24H30O3
Isisindo somzimba: 366.49
Umjikelezo we-Drospirenone powde
Igama leKhemikhali: I-Drospirenone powde,
Igama loRhwebo: Yasmin, Yaz
I-Drospirenone powde Ukusetyenziswa
Ukuthatha eli liyeza kunokwandisa umngcipheko wegazi, i-stroke okanye i-heart attack. Unomngcipheko ngakumbi xa unesifo soxinzelelo segazi, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, okanye ukuba ukhuluphele. Umngcipheko we-stroke okanye i-clot yegazi iphezulu ngeli xesha kunyaka wokuqala wokuthatha iipilisi zokulawula ukuzala. Umngcipheko wakho uphakamileyo xa uqala kabusha iipilisi zokuzalwa emva kokungazithatha kwiiveki ze-4 okanye ngaphezulu.
Ukubhema kunokwandisa kakhulu umngcipheko wegazi, i-stroke, okanye i-heart attack. Umngcipheko wakho ukwandisa umntu omdala kwaye utshaya. Akufanele uthabathe eli liyeza xa ubhema kwaye uphelele iminyaka eyi-35.
Musa ukusebenzisa ukuba ukhulelwe. Yeka ukusebenzisa iyeza kwaye utshele ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhulelwe, okanye ukuba ulahlekelwa ngamaxesha e2 ukuya esikhathini. Ukuba usanda kubantwana, linda ubuncinane iiveki ze-4 ngaphambi kokuba uthathe le nyeza.
Akufanele uthabathe eli liyeza ukuba unayo:
-i-adrenal gland disorder;
uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye olungalawulekiyo;
(isifo se-coronary disease, imbali yesifo senhliziyo, isifo, okanye i-clot yegazi);
- ingozi eyongeziweyo yokuba neengcango zegazi ngenxa yengxaki yenhliziyo okanye ingxaki yokufa kwegazi;
-engxaki zokucwangcisa (ikakhulukazi ukuba zibangelwa isifo sikashukela);
-iyimbali yesifo somhlaza we-hormone, okanye umhlaza wesifuba, isisu / isibeletho, okanye isondo;
ukuphuma kwintsholongwane engazange ihlolwe ngugqirha;
isifo sesifo okanye umdlavuza wesibindi;
-nceda i-migraine ikhanda (nge-aura, ingxinano, ubuthathaka okanye utshintsho lomboniso), ngakumbi xa uneminyaka engaphezulu kwe-35;
-iyimbali ye-jaundice ebangelwa ukukhulelwa okanye ukulawula iipilisi;
-ukuba utshaya kwaye uphelele iminyaka eyi-35; okanye
-kuba uthatha nayiphi na imithi ye-hepatitis C ene-ombitasvir / paritaprevir / ritonavir (Technivie).
Ukuqinisekisa ukuba eli liyeza likhuselekile kuwe, xelela ugqirha ukuba ngaba unakho:
iingxaki zokuqala, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, okanye ukuba ulungele ukuba negazi;
amazinga omgangatho we potassium egazini lakho;
i-cholesterol yomlilo okanye i-triglycerides, okanye ukuba ukhuluphele;
isifo okanye isifo sesifo;
- i-thyroid esebenzayo, isifo sikashukela, isifo se-gallbladder; okanye
Amahomoni ale mayeza angadlula ubisi lwebele kwaye angalimaza umntwana oswele. Eli gama linganciphisa umveliso wobisi lwebele. Ungayisebenzisi ukuba usondla.
Yiyiphi imilinganiselo yeDosaspirenone powde
Thatha la mayeza ngomlomo njengoko uwalathiswa ngugqirha wakho, okanye ngaphandle kokutya, ngokuqhelekileyo kanye ngosuku. Khetha ixesha lokulungele ukuba ukhumbule, kwaye uthathe ipilisi yakho ngexesha elinye ngosuku, iiyure ze-24 ngaphandle. Ukuthabatha le nyilisi emva kwesidlo sakusihlwa okanye ngexesha lokulala kunokuncedisa ukunciphisa isisu kunye nesiphithiphithi.
Landela imiyalelo yephakheji ukufumana ithebhulethi yokuqala, qala ngethebhulethi yokuqala kwipakethi, kwaye uwathathe ngendlela echanekileyo. Musa ukunqumla naluphi na amanani. Ukukhulelwa kunokwenzeka xa uphoswa iipilisi, qalisa ipakisha entsha ngokukhawuleza, okanye uthathe ipilisi yakho ngexesha elithile lemihla kunokuqhelekileyo.
Ipilisi yakho ipake iipilisi ze-21 ngamachiza asebenzayo (kunye namahomoni). Inokuthi iqulethe izikhumbuzo ze-7 (ngaphandle kwamahomoni) ekupheleni kwepakethi. Thatha iphilisi enye esebenzayo (kunye namahomoni) rhoqo ngeentsuku ze-21 ngokulandelana. Ukuba usebenzisa imveliso ngeepilisi ze-28, thatha ipilisi yokukhumbuza kanye ngosuku kwii-7 iintsuku emva kokuba uthathe ipilisi esebenzayo yokugqibela ngaphandle kokuba ulandelwe ngugqirha wakho ngenye indlela. Ukuba usebenzisa imveliso ngeepilisi ze-21, musa ukuthatha nawaphi na amacwecwe kwiintsuku ze-7 ngaphandle kokuba ulandelwe ngunyango wakho ngenye indlela. Kufuneka ube nexesha lakho rhoqo kwiintsuku ze-3 emva kokuba uthathe ithebhulethi yokugqibela esebenzayo kumjikelezo. Emva kokuba uthathe ipilisi yokugqibela yokukhumbuza kwipakethi okanye uhamba kwiintsuku ze-7 ngaphandle kokuthatha ipilisi esebenzayo, qalisa ipakisha entsha ngosuku olulandelayo nokuba ungexesha lakho. Ukuba awufumani ixesha lakho, qhagamshelana nogqirha wakho.
Ukuba okokuqala ngethuba usebenzisa le myeza kwaye awuguquki kwelinye uhlobo lokulawulwa kwe-hormonal (njenge-patch, nezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa), thatha i-tablet yokuqala kwipakethi ngeCawa yokuqala emva kokuqala ixesha lokuya esikhathini okanye ngosuku lokuqala lwenyanga yakho. Ukuba ixesha lakho liqala ngeCawa, qalisa ukuthatha le mayeza ngaloo mini. Ngomjikelezo wokuqala wokusetyenziswa kuphela, sebenzisa uhlobo olongezelelweyo lokulawulwa kokuzalwa kwe-hormones (njengamakhondomu, ukubulala imithi) kwiintsuku zokuqala ze-7 ukukhusela ukukhulelwa kuze kube yile myeza inexesha elaneleyo lokusebenza. Ukuba uqala ngosuku lokuqala lwenyanga yakho, akudingeki ukuba usebenzise ukulawulwa kokuzalwa emva kweveki yokuqala.
Buza ugqirha wakho okanye i-pharmist ngolwazi malunga nendlela yokutshintsha kwezinye iindlela zokulawulwa kokuzalwa kwe-hormone (njenge-patch, nezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa) kule mveliso
Indlela i-Drospirenone powde isebenza ngayo
I-Drospirenone powde ingenye yeepestins ezahlukeneyo ezazisetyenziswa kwiipilisi zolawulo lokuzalwa. Uninzi lweepilisi zokulawula ukuzalwa (inhlanganisela yokukhulelwa komlomo) zidibanisa ingqungquthela yokwenziwa kwe-hormone ye-progesterone (ebizwa ngokuba ngu-progestin) kunye nenkolelo yokwenziwa kwe-hormone ye-estrogen. Ukongezelela ekukhuseleni ukukhulelwa, ezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa eziqulethe i-Drospirenone powde nazo zivunyiwe ukuphatha iimpawu zengxaki yesifo esiyingozi, (PMDD), ukunyanga i-acne modne, nokunyusa amazinga omntu, kubasetyhini abakhetha ukusebenzisa imithi yokubeleka ngomlomo ngokuzalwa lawula ..
Iiprogestins ezifana ne-Drospirenone powde zidibanisa ngokukhululekileyo kwiiseli ezijoliswe kuyo kwindlela yokuzala isisu, i-mammary gland, i-hypothalamus, kunye ne-pituitary kwaye ibophe kwi-progesterone receptor. Emva kokubophelwa kwi-receptor, i-progestins iyancipha ukwanda kwe-gonadotropin yokukhulula i-hormone (GnRH) ukusuka kwi-hypothalamus kwaye ixhamle ukuqhubela phambili kwe-LH.
Musa ukutshaya ngelixa uthabatha iipilisi zokulawula ukuzala, ngakumbi ukuba uneminyaka engaphezulu kwe-35 ubudala.
Iipilisi zokulawula ukuzalwa akuyi kukukhusela kwizifo ezithathelwana ngesondo-kuquka iHIV ne-AIDS. Ukusebenzisa ikhondom yindlela ephela yokuzikhusela kwezi zifo.
Uninzi lweziyobisi lunokusebenzisana neepilisi zokulawula izibelelo kwaye zenze zibe ngempumelelo, ezingabangela ukukhulelwa. I-Ethinyl estradiol inokuchaphazela amanqanaba egazi kwezinye iziyobisi, ezenza zibe yimpembelelo engaphantsi okanye kwandayo. Oku kubandakanya i-prescription kunye namayeza amaninzi, amavithamini kunye nemveliso yemveliso.
I-Drospirenone powde Marketing
Ngaba i-Drospirenone powde Ingaba nayiphina imiphumo engaphandle
I-Drospirenone powde ihluke kwezinye iiprostines zokwenziwa kwendlela yokuba iprojekthi yezolimo yezilwanyana kwiingcaphephe zovavanyo zibonisa ukuba sisondele kwiprogegone yendalo. Ngaloo ndlela unempahla ye-anti-mineralocorticoid, iphikisana nomsebenzi we-estrogen ovuselelwe kwintsebenzo ye-renin-angiotensin-aldosterone, kwaye ayikho i-androgenic.
Ukuxilongwa ngokubanzi ngokulandela umlomo okanye ukulawulwa kwamathambo. Ezi zimbini ezinkulu ze-metabolites azisebenzi kwaye zenziwe zizimeleyo zenkqubo ye-CYP450. I-metabolites ifomu ye-asidi ye-Drospirenone powde eyenziwe ngokuvula kwindandatho ye-lactone kunye ne-4,5-dihydro-Drospirenone powde-3-sulfate.
intloko, ukutshintsha kwemizwelo, ukuziva udiniwe okanye ukhathazekile;
ukutyeba kwakho; okanye
utshintsho kwixesha lakho lokuya esikhathini, ukunciphisa ukuhamba kwesondo.
Oku akusiyo uluhlu olupheleleyo lweempembelelo kwaye abanye bangenzeka. Shayela ugqirha wakho kwiingcebiso zonyango malunga nemiphumo emibi.
Indlela yokuthenga i-Drospirenone powder evela kwi-AASraw
Drospirenone powder Recipes